भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिका बेला कोको थिए ? – Globalpatrika
मुख्य पृष्ठईतिहास पत्र-पत्रिकाभारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिका बेला कोको थिए ?
भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिका बेला कोको थिए ?
काठमाडौं – भारतसँग महाकाली सन्धि भएको २३ वर्ष भयो। उत्ति नै समय भयो महाकाली नदीको स्रोतको कुरा औपचारिक रूपमा उठेको। तर, भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा निकालेपछि नेपालमा नेताहरूबीच आरोप÷प्रत्यारोप चलेको छ। भारतसँग सन्धि गर्न भूमिका रहेका तिनै नेता ‘जुहारी’ खेलेर समस्या सल्टाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जानकार बताउँछन्।
भारतीय प्रतिनिधिले सन्धि अनुमोदनका क्रममा बोलेका कुरा र सरकार प्रमुख तथा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएका सहमति भारतले तोडेको उनी बताउँछन्। ‘एकतर्फी नक्सा निकाल्न भारतलाई कूटनीतिक रूपमा मिल्छ ? ’, उनको प्रश्न छ। – अन्नपुर्णपोस्टबाट